Naya course » युवाहरुलाई व्यवसायमा टिकाई राख्न मेरो भुमिका हुनेछ : गोपाल अधिकारी युवाहरुलाई व्यवसायमा टिकाई राख्न मेरो भुमिका हुनेछ : गोपाल अधिकारी – Naya course
युवाहरुलाई व्यवसायमा टिकाई राख्न मेरो भुमिका हुनेछ : गोपाल अधिकारी
कोहलपुर उद्योग वाणिज्य संघको यहि फागुन २२ गते हुने निर्वाचनका लागि साझा समावेशी व्यवासायी समूहको खुुला तर्फको सदस्य पदका उमेदवार गोपाल अधिकारीले आफुुलाई भोट दिएर सहयोग गर्न व्यावसायीहरुलाई अनुुरोध गरेका छन । कोहलपुुर ३ मदनचोकमा न्युु अधिकारी फेन्सी एण्ड शुु सेन्टर व्यबसाय गदै आएका अधिकारी बिष्णुु खनालको नेतृत्वको साझा समावेशी व्यवसायी प्यानलको तर्फबाट सदस्य पदमा उम्मेदवारी दिएका हुन । २०६८ साल देखि ब्यबसाहिक रुपमा लागेका अधिकारी रझेना खानेपानी तथा सरसफाई समितिका निवर्तमान सचिब, नवकिसान कृषि सहकारी संस्थाका अध्यक्ष तथा मदनचोक बजार व्यावस्थापन समितिका अध्यक्ष छन ।
साथै कोभिडको समयमा आफ्नो पहलमा करिब २०५ जना गरिब तथा उत्पीडनमा परेकालाई मदनचोक बजार व्यबस्थापन समिति मार्फत राहत बितरण गरेका थिए । अधिकारीले आफु निर्वाचनमा बिजय पछि व्यापारीहरुका हक र अधिकारका निम्ति लागीपर्ने बताए । उनले युवाहरुलाई व्यवसायमा आकर्षित गर्नु आफ्नो मुख्य जिम्मेवारी रहेको बताए । निर्वाचनकै विषयमा गोपाल अधिकारीसँग गरिएको कुराकानी ।
कोहलपुरका उद्योगी ब्यवसायी संस्था कोहलपुर उद्योग बाणिज्य संघको नयाँ नेतृत्वको लागि निर्वाचन हुदैछ । सो निर्वाचामा बिष्णु खनालले नेतृत्व गरेको साझा समाबेसी समुहबाट मैले सदस्य पदमा उम्मेदवारी दिएको छु । खसगरी युवाहरुलाई उद्योग र व्यवसाय तर्फ आर्कर्षित गर्ने र सो व्यवसयामा उनिहरुलाई टिकाई राख्न मैले भुमिका खेल्ने छु ।
२. ब्यवासयी भेटघामा हुनुहुन्छ, के भन्छन व्यवसायीहरु ?
व्यवसायीहरुका समस्या धेरै छन् । भेटघाटको क्रममा हामीलाई धेरै समस्याहरु सुनाउनुहुन्छ । उनीहरुले अपनत्व खोजिरहेका छन् । उहाँहरुले हामी किन त्यहाँ संगठित हुने, अहिलेसम्म उद्योग वाािण्ज्य संघले हामीलाई के दिएका छन् र भन्ने प्रश्न गर्नुहुन्छ । हामीलाई उहाँहरुका चिन्ता नगर्न भनेका छौं । हामीलाई जिताउनुहोस हामी तपाईहरुका माग सम्बोधन गर्न तयार छौंै । अहिले जुन हाम्रो टिम र हामीले उठाएको मुद्दा छ, त्यो व्यवसायीहरु कै हितका लागि हो । त्यसैले हामीले उहाँहरुलाई आस्वस्त बनाएका छौ । केही युवा व्यवसायीहरुको जोस र जाँगरले हामीलाई प्रभावित गरेको छ । उहाँहरुले हामीलाई समर्थन गर्नुभएको छ ।
हामीसँग एउटा सक्षम नेतृत्व छ । जसले कोहलपुर उद्योग वाणिज्य संघको स्थापनादेखि यहाँसम्म ल्याउन भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ । व्यवसायीहरुले बिष्णु खनाल नेतृत्वको प्यानलका उम्मेदवारहरुलाई निकै भरोसा गर्नुभएको छ । हामी पनि विभिन्न क्षेत्रमा दुःख गरेर माथि उठेका साथीहरु छौ । त्यसैले यसपटक मतदाताले हामीलाई भोट दिन्छन् भन्नेमा म ढुक्क छु ।
५. तपाई संघमा गएमा युवा लक्षित कार्यक्रम के गर्नुहुन्छ ?
म पनि युवा हुँ । यस क्षेत्रमा धेरै अनुभव बटुलेको छु । त्यसैले मेरो प्राथमिकता नै युवाहरुको विषयमा पैरवी गर्ने हुनेछ । यस्तै व्यवसाय आर्थिक अवस्थासँग जोडिएको कुरा हो । जबसम्म हामी सफल हुदैनौं तबसम्म देश सफल हुन सक्दैन । गाउँका टोलमा पुग्दा युवाहरु व्यवसायमा जुटिरहेको देखेको छु । मलाई एकदमै खुसी लागेको छ । त्यसैले मैले जितेर गएमा उनीहरुलाई कसरी सफल व्यवसायी बनाउने विषयमा नै सोच्नेछु । राज्यका निकाय र अन्य सरोकार वलासँग सहकार्य गर्नेछु ।
६. अत्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ ?
संसारमा सबै चीज किनेर पाइन्छ । तर भोट मात्रै यस्तो चिज हो । जुन मागेर मात्रै पाइन्छ । मागेर पाउने भनेको त्यही मत माग्न हामी आएका छौं । कृपाया एकपटक म गोपाल अधिकारी सहित साझा प्यानललाई बिजयी गराई दिनुहोल भन्न चहन्छु । हामी काम गर्नेछौं भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु ।